Israa’iil oo duqaysay goobo ka mid ah caasimadda Suuriya ee Dimishiq – Radio Daljir
Juunyo 26, 2018 6:16 b 0
Laba gantaal oo ay soo rideen ciidamada Israa’iil ayaa lagu beegsaday goobo u dhow garoonka diyaaradaha ee caasumadda Suuriya ee Dimishiq, sida ay ku warantay warbaahinta dowladda Suuriya.
Wakaaladda wararka ee Suuriya ayaa sheegtay “Laba gantaal oo ay soo rideen ciidmada Israaiil ayaa ku dhacay goob u dhow garoonka diyaaradaha ee caasimadda Suuriya ee Dimishiq”.
Illo katirsan mucaaradka Suuriya ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee DPA in weerarka habeen barkii lala bartilmaameedsaday diyaarad xamuul oo Iiraan laga leeyahay, taasi oo caga dhiganaysay garoonka diyaaradaha caaalamiga ee Dimishiq.
Wakaaladda wararka ee AFP oo la xiriirtay afhayeenka ciidamada Israa’iil si wax looga waydiiyo dhacdadan ayaa waxaa uu sheegay inuu wax faallo ah ka bixinayn wararka dibadda ah.
Maamulka Israaiil ayaa horay uga digay joogitaanka ciidamada militariga ee Iiraan ee Suuriya oo ay daris yihiin, taasi oo ay u aragto mid khatar ku ah ammaankeeda, waxaana ay ciidamadooda ay horay weeraro ugu qaadeen saldhigyo ciidamada Iiraan iyo kuwa dowladda Suuriya ee xiriirka la leh.
Bishii May Israaiil ayaa weeraro ku qaaday xarumo mlitari oo ku yaala dalka Suuriya, iyadoona ku eedaysay in Iiraan kasoo qaado weeraro gantaal oo ka dhan maamulkeeda.
Kooxda Xisbulaah iyo Iiraan ayaa ka dhinac dagaalama ciidamada Bishaar Al-asad ee dowladda Suuriya, Israa’iil ayaa sanadkii 1967dii ka qabsatay Suuriya buuraha Golan Heights, kadib dagaal lix berri socday oo ay ugu dambayntii kula wareegatay buurahaasi, inkasta oo wali aan loo aqoonsan inuu ka mid yahay dhulkeeda.